Best MP4 ID3 Tag Editor maka Windows / Mac OS / Linux
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eche MP4 dị ka a video faịlụ Ọkpụkpọ nanị, faịlụ na .mp4 extensions ịnwekwa music na ha enweghị ihe ọ bụla video iyi. A na-eme MP4 a vasatail format na ọtụtụ ji kpọrọ faịlụ ụdị na bụ dakọtara na fọrọ nke nta niile media Player eji ofụri ụwa. MP4 mkpado editọ bụ fechaa omume na-ekwe ka ị jikwaa metadata gị ọdịyo faịlụ. Kasị mkpado editọ na ike ịgbanwe MP4 ID3 mkpado-akwado faịlụ ndị ọzọ formats. Nke a na-enye ohere ọrụ iji otu usoro ihe omume jikwaa dị iche iche ọdịyo faịlụ dị iche iche na extensions.
Part 1. Best MP4 ID3 Tag Editor maka Windows
Part 2. Best MP4 ID3 Tag Editor maka Mac OS X
Part 3. Best MP4 ID3 Tag Editor maka Linux
mp3Tag Pro na-mepụtara ManiacTools na natara ndị kasị elu ọrụ Fim na ekele ha nwere n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ bụ a shareware (ugwo) omume.
mp3Tag Pro a na-ewere otu nke kasị mma na nke kasị vasatail ID3 mkpado editọ dị online na-akwado ogbe ID3 mkpado edezi. Ọ bụghị nanị na nke a, na mp3Tag pro na ogbe edezi pụkwara mere na faịlụ dị iche iche na formats. Nke a n'ihu pụtara na ị na-ọ bụla ogologo mkpa dezie ID3 mkpado nke MP4, MP3, na FLAC faịlụ dị iche iche sessions, na ID3 mkpado niile faịlụ nwere ike jisiri ke otu laa.
• mp3Tag Pro enye gị ohere download album na nkà na lyrics gị M4A / MP4 tracks.
•-enye gị ohere nyegharịa faịlụ site na iji ozi na ọ nwere ike mfe extracts si na mkpado.
•-akwado ma ID3v1 na ID3v2.
• Ke adianade MP4 , mp3Tag Pro-akwado iche iche faịlụ ndị ọzọ formats gụnyere MP3, FLAC, WAV, wdg
•-enye ohere ogbe edezi nke ID3 na mkpado ma na kwa na dị iche iche faịlụ formats. cons • Ọ bụ a shareware na-abịa na a price mkpado. • Ụfọdụ ndị nwere mkpesa banyere ya interface, na-ekwu na ọ na-ese a bit bụzi ihe mgbe ochie na ọ na-aka ịghọta usoro ihe omume, karịsịa mgbe ha na ọhụrụ na ngwa. • nwere obere-windowed interface nke na-eme ya ike maka ọrụ nwere a doo anya nke dị nhọrọ.
Jaikoz bụ ihe kasị mma MP4 ID3 mkpado nchịkọta akụkọ nke OS X n'elu ikpo okwu dị ka kwa ọrụ 'nzaghachi. Usoro ihe omume si ọhụrụ version bụ 8.2.1 na e wepụtara na February 17, 2015.
Jaikoz bụ otu oru oma ID3 mkpado nchịkọta akụkọ nke Mac OS X na-adịghị na-akwado MP4 ma-enye gị ohere dezie ID3 mkpado nke ndị ọzọ na ọdịyo faịlụ formats dị ka FLAC, MP3, WMA, wdg .. The omume na-achọ Intel processor, na OS X 10.7 ma ọ bụ n'elu tinyere Java 1.5 ma ọ bụ n'elu na-arụ ọrụ nke ọma.
Jaikoz akpaaka-formats ogidi iji ya AutoCorrect atụmatụ na-arụ ọrụ na njikọ na AutoFormat, n'ihi ya eme akpaka capitalization na ndị ọzọ na formatting ihe ọmụma dị ka mkpa.
Jaikoz ọkụ na ọdịyo faịlụ 'metadata na MusicBrainz - a maara nke ọma nchekwa data na-ekwusi ike na ihe ndekọ nke gburugburu 10 nde ọdịyo egwu.
• Jaikoz dị maka Windows, OS X, na Linux.
• The Mmepe nke Jaikoz nkwa inye niile software upgrades ka ndị na-azụ maka ndụ na nnọọ ọ na-eri.
• Yana MP4 nkwado, Jaikoz-enye gị ohere dezie ID3 mkpado nke faịlụ ndị ọzọ formats gụnyere OggVorbis, FLAC, WMA, wdg
• Na akpaghị aka synchronizes na ID3v1 na ID3v2 mkpado nke ọdịyo faịlụ.
• akwado English, Grik, German, Spanish, na Italian asụsụ. cons • Jaikoz bụ a shareware na-abịa na a price mkpado. • nanị shortcut igodo, ọtụtụ n'ime ndị na-aga-eme ga-eme ma. • adịghị nwere ezi-na-achọ na mfe na-eji interface.
EasyTAG bụ a freeware na multi-format akwado ID3 mkpado nchịkọta akụkọ nke Linux na-ekele ọtụtụ ọrụ n'ụwa nile. Na ọtụtụ asụsụ nkwado, usoro ihe omume a na-eji ọtụtụ mba ma ndị si n'ógbè dị iche iche na asụsụ.
EasyTAG akwado akpaaka-geo na-akpaghị aka populates kwekọrọ ekwekọ ubi na iji filename na ndekọ Ama. Na osisi-ụdị echiche nke interface,-eme nchọgharị na subdirectories-aghọ mfe nke dị ịrịba ama expedites na ID3 mkpado management aga-eme.
• EasyTAG akwado multiple ọdịyo faịlụ formats gụnyere MP4, M4A, MP3, Ogg Opus, FLAC, WavePack, MusePack, MP2, wdg
• Ihe omume ahụ bụ ike nke na-autocompleting na-ezughị ezu ma dị mkpa ọmụma na n'ubi.
• The software bụ ike nke na renaming faịlụ dị ka akpado ọmụma.
• Ihe omume na-enye ohere ogbe nhazi nke faịlụ na-ebikwa n'ime otu ndekọ. cons • EasyTAG mkpọka mgbe ụfọdụ mgbe faịlụ search a rụrụ.
Ọ dị mfe dezie ID3 mkpado na MP4 na ndị ọzọ na ọdịyo faịlụ bụrụhaala na unu nweta ihe kasị mma ID3 mkpado nchịkọta akụkọ nke nwere ike mezuo ihe niile gị mkpa. Ọ bụrụ na ị bụ onye na ọkachamara na chọrọ ka ịgbakwunye ma ọ bụ megharịa ID3 mkpado na ọdịyo faịlụ maka azụmahịa nzube, ọ na-atụ aro na ị ga-aga n'ihi a na-akwụ ụgwọ ID3 mkpado nchịkọta akụkọ iji nweta ozugbo na oru oma oru nkwado, na mgbe mmelite maka usoro ihe omume. Ọ bụkwa ihe amamihe dị na bulie a mkpado nchịkọta akụkọ na-akwado ogbe formatting. Otú a ị nwere ike ịzọpụta a ezigbo ego nke oge site na expediting dum ID3 mkpado edezi usoro na a simplified n'ụzọ.
Olee otú iji tọghata MP4 ka mpg na Zero Ogo Loss
Olee otú iji tọghata ISO ka MP4 na 1 Pịa
Olee otú mbubata MP4 Video n'ime Adobe Premiere Pro
> Resource> MP4> Best MP4 ID3 Tag Editor maka Windows-OSX-Linux